Waaheen Media Group » Xukuumadda Somaliland oo $100,000 ku bixisay go’aamadda ka soo baxay Fanaaniinta Xidigaha Geeska?
Browse:Home Videos Xukuumadda Somaliland oo $100,000 ku bixisay go’aamadda ka soo baxay Fanaaniinta Xidigaha Geeska?
Xukuumadda Somaliland oo $100,000 ku bixisay go’aamadda ka soo baxay Fanaaniinta Xidigaha Geeska?
Published by Waaheen Media on March 18, 2017 | Comments Off on Xukuumadda Somaliland oo $100,000 ku bixisay go’aamadda ka soo baxay Fanaaniinta Xidigaha Geeska?
Warar la isla dhex marayo magaaladda hargeysa ayaa sheegaya go’aamadii xidigaha Geesku kaga caydhiyeen xidigaha Geeska Fanaaniin caan ah, iyo waliba ku soo laabashada hogaanka Xidigaha ee Abwaan Laab-salaax, inay xukuumadda Somaliland ku bixisay adduun dhan sideed boqol oo milyan oo Somaliland shilling ah oo u dhiganta $100,000.
Wararkan ayaa sheegaya laba toddobaad ka hor in hogaanka cusub ee xidiguhu Baanka Dhexe ee Somaliland ka qaaday lacagtaas si uu ugu fadhiisiiyo Kooxda, isla markaana ay soo saaraan go’aamadan ka dhanka ah xubno ka mid ah Kooxda oo Somaliya tagay sida Yurub Geenyo, Hodan C/raxmaan iyo Nimcaan Hilaac.
Dhaqaalaha ku baxay qandaraaskan waxa ay wararku sheegayaan in uu fududeeyey Af-hayeenka Madaxtooyadda Somaliland Xuseen Dayr oo kulankii ugu danbeeyey ee Xidiguhu ku shaacinayeen go’aamadoodan ka hadlay, isagoo si badheedh ah uga soo dhex muuqday, isla markaana ku taageeray go’aamada ka soo baxay.
Af-hayeen Dayr oo shaqadiisu tahay xidhiidhinta hawlaha Madaxtooyadda iyo Saxaafadda, gaar ahaan u gudbinta war-saxaafadeedyada Madaxweynaha ayaa ku mashquulsanaa hawsha xidigaha, halka shaqadii uu Madaxtooyadda ka hayey aanu ku baraarugsanayn. Tusaale ahaan Af-hayeenkii ugu cuslaa ee Madaxtooyadda Somaliland soo mara oo ahaa Marxuum Cabdi Idiris waxa uu si toos ah ula macaamili jiray hay’addaha warbaahinta halka Dayr oo ay shaqadiisa ahayd uu Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee Wadani C/raxmaan Ciro uga dheereeyey.
Go’aanka Xidigaha Geesku ku Eryeen Fanaaniintaasi oo ay iska cadahay inay yihiin kuwo siyaasadeed ayaa waxa sababay markii ay Xukuumaddu dabarka uga furtay Bulshada Reer Somaliland inay isku socon karaan Somaliya, taasoo sababtay Doorashadii ugu danbaysay ee Somaliya inay tagaan dad badan oo Reer Somaliland ah, gaar ahaan Suxufiyiin iyo Fanaaniin, kuwaas oo dhaqaale raadis u tagay mashruucii Doorashada Madaxtinimo ee Somaliya.
Sida ku cad Heshiiskii uu dhawaan wasiirka Madaxtooyadda Somaliland Maxamuud Xaashi ku Dooday ee Jabuuti ee ay wada saxeexdeen Xasan Sheekh(Madaxweynihii hore ee Somaliya) iyo Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa ka mid ahaa qoddobka fasaxaya isu socodka labada Dal, kaasoo ay ka faa’iidaysteen dadka imika lagu haysto Xamar baad tagteen ee ay ka midka yihiin Fanaaniintan au Xukuumadda Somaliland ka Eriday Xidigaha Geeska iyo C/maalik Col-doon oo wali falkaasi u xidhan.
Ma aha oo kaliya in Xukuumadda Somaliland Xidigaha Geeska oo kaliya ku siisay Lacagtan mashruuca ay sahashay ee
Somaliweynimada, hase yeeshee waxa jira Kooxo kale oo Suxufiyiin ah oo isaga dab-qaada labada Madaxtooyo ee Somaliland iyo Somaliya, kuwaas oo ay lacag qadarkeeda lagu qiyaasay $70,000 laba jeer ka siisay labada suxufi ee laga eryey shaqadii ugu danbaysay ee ay ka hayeen Telefishanka Kalsan eek ala ah C/risaaq Tarra iyo Maxamed Yuusuf Bakayle.
Mashariicdan ay xukumaddu ku bixinayso lacagaha sharci darrada ah ayaa ah kuwo aan ka difaacayn Eedaha ay dhexda ugu jirto ee ah dabcinta qadiyadda Somaliland oo ay iyadu Ooda uga qaaday dadka aan qiyaasi Karin ama aan ku xisaabtamayn Dhiig bixii loo soo maray Madax banaanida Somaliland.